के भिटामिन ‘डी’ सुर्यको किरणसंगै आउने हो त ?
कसरी प्राप्त गर्दछ त हाम्रो शरीरले सुर्यको किरणवाट भिटामिन ‘डी’ ?
प्राय: सबैले स्कुलदेखि नै भिटामिन ‘डी’ सुर्यको किरणमा पाइन्छ भन्ने कुरा पढ्दै र बुझ्दै आएको पाइन्छ तर यहाँ हामीमध्ये धेरैलाई यस बिषयमा वास्तविक ज्ञान नभएको पाइन्छ । धेरैले सुर्यको किरणसंगै भिटामिन ‘डी’ हाम्रो छालामा प्रवेश गर्छ भन्ने गलत धारणा राख्दछन् ।
यो कुरा सत्य हो कि सुर्यको किरण भिटामिन ‘डी’को लागि उपयोगी हो तर सुर्यको किरणसंगै भिटामिन ‘डी’ हाम्रो शरीरमा भने प्रवेश गर्ने चाहि होइन । जब सुर्यको किरण हाम्रो छालामा प्रबेश गर्दछ तव सुर्यको किरणमा भएको पराबैजनी किरण (UV-Ray)लाई हाम्रो छालाको इपीडरमिस नामक तहमा भण्डार भएर रहेको 7-dehydrocholesterol(7-DHC) नामक यौगिकले सोस्छ र सुर्यको किरणमा भएको उक्त पराबैजनी किरणको उपस्थितिले गर्दा 7-DHC मा रासायनिक परिबर्तन हुन गई भिटामिन ‘डी’मा परिबर्तन हुन्छ । उक्त भिटामिन बास्तबमा भिटामिन ‘डी ३’ Vitamin D3 (Cholecalciferol) हो ।